Tag: fitantanana data | Martech Zone
Tag: fitantanana data
2021 no hanamboatra azy na hanorotoro azy ho an'ny mpanonta. Ny taona ho avy dia hampiakatra avo roa heny ny tsindry amin'ireo tompona haino aman-jery, ary ireo mpilalao mahay indrindra ihany no hijanona ambony. Ny dokambarotra niomerika araka ny fantatsika fa efa hifarana izao. Handeha amin'ny tsena misy sombin-javatra misimisy kokoa isika, ary mila mieritreritra ny toerana misy azy ireo ny mpanonta amin'ity ecosystem ity. Ireo mpamoaka boky dia hiatrika olana goavana amin'ny fahombiazany, ny mombamomba ny mpampiasa ary ny fiarovana ny angon-drakitra manokana. Mba
Talata, Desambra 10, 2013 Alatsinainy Desambra 9, 2013 Douglas Karr
Ity infographic avy amin'ny New Jersey Institute of Technology ity dia mampiseho ny Data Mining sy ny rafitra fanohanana ny fanapaha-kevitra, mamaritra ny fizarana efatra samihafa ao anatin'ny rafitra ankapobeny. Data Management - manangona ny fampahalalana azon'ny orinasa iray avy amin'ny varotra, ny firaketana ary ny tatitry ny mpanjifa. Model Management - fiezahana hamorona fehin-kevitra avy amin'ny paikadin'ny orinasa efa misy hahitana raha nahomby izy ireo na tsia. Masinera fahalalana - toa mamorona paradigma vaovao hifaneraserana amin'ny fironana.
Infochimps: Ireo manam-pahaizana momba ny data lehibe
Talata, Janoary 29, 2013 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
Amin'ny maha masoivohom-pokontany antsika, ny mpanjifanay dia mangataka anay bebe kokoa hamantatra ny habetsaky ny angon-drakitra omena azy ireo avy amin'ny motera fitaterany - CRM, Email, Media sosialy, sns. magazay ao amin'ny mpizara anay anatiny, nanotra azy, ary avy eo nanondrana ireo vaovao ilainay. Ny data anefa dia nanjary sarotra kokoa tamin'ny sivana, fizarana ary fizarana. Ny media sosialy, ohatra, dia manome tadiny sy URL an'ny
Mihinana ny sakafonao manokana
Zoma, Febroary 6, 2009 Alahady, Aogositra 23, 2009 Douglas Karr
Ho hitanao amin'ny Internet ity teny ity. Rehefa miresaka momba ny bilaogy ataon'ny orinasa aho dia mampiasa ilay teny satria ny fitarihan'ny orinasanay dia avy amin'ny… bilaogin'orinasa. Izany dia nilaza fa ity dia sary mampihetsi-po izay hitako tamin'ny alàlan'ny StumbleUpon tao amin'ny bilaogin'i Scott Rope. Miresaka momba ny fihinanana sakafo alika manokana! Inona no karazana dokam-barotra azonao atao amin'ny fampidirana ny vokatrao? Te hahita ohatra vitsivitsy hafa momba an'io!